Zimbabwe Teachers to Return to Schools - allAfrica.com
Zimbabwe Teachers to Return to Schools
Educators nationwide have vowed to return to their posts at the beginning of the new school year despite ongoing concerns over low wages and poor working conditions.
SW Radio, 3 January 2013
Teachers in Zimbabwe have vowed to return to their stations when the school year begins next week, despite ongoing anger about low salaries and poor working conditions. Read more »
Zimbabwe's unity government has announced a package of measures to get teachers and children back into classrooms.
Zimbabwe: 'Teachers to Report for Duty'
Teachers will report for duty as normal when schools re-open next week despite concerns about their salaries, representatives of teachers' unions said yesterday. Schools open for… Read more »
Zimbabwe: Teachers' Strike Looms
RNW Africa, 17 December 2012
Zimbabwe teachers are bracing for a crippling industrial action in January next year as civil servants push for a salary increment ahead of polls President Robert Mugabe wants held… Read more »